Dress from dantelina
Ny akanjo vita amin'ny dantelina dia mety mahasoa amin'ny toe-javatra samihafa. Miankina amin'ny fomba amam-panao sy ny halavany dia azo apetraka eo amin'ny fandraisana an-tanana ofisialy, ary amin'ny fanendrena, hihaona amin'ny namana, ary na dia amin'ny antoko club club aza. Lace - iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra sy mendrika indrindra dia tsy isalasalana fa hanasongadina ny maha-vehivavy anao sy ny hakantony .
Ny Lace dia afaka manamboatra ny androany sy ny birao. Ny famokarana toy izany dia hahatonga azy ireo ho vavy kokoa, ary ny endrika tsotra sy ny lamba dia hanasongadina ny hatsaran'ny silhouette. Ankehitriny dia maro ny mpanamboatra manamboatra ny haingon-damosina amin'ny sary sokitra amin'ny farany. Ny fomba amam-panaivay dia tena malaza, indrindra ho an'ny takariva am-bavan'ny akoho. Ny famaranana dantelina mihidy dia manome mistery sy tsy manan-tsiny ilay zazavavy. Tena manintona indrindra ny mijery ny akanjo mainty hoditra miaraka amin'ny dantelina any aoriana. Ny kofehy vita amin'ny kofehy dia afaka manamboatra ny kofehy sy ny akanjo ary ny akanjony, tsara, ary raha tsy matahotra ny ho mpandala ny mahazatra ianao, dia manoro anay hijery akanjo mainty miaraka amin'ny akanjo fotsy fotsy na mifamadika amin'izay.
Ny Lace dia mifanaraka tsara amin'ny lamba, avy amin'ny denim sy ny kavina amin'ny satin-boninahitra sy ny seza. Amin'ity vanim-potoana ity, ny kiran'ny tena mpanjakavavy dia niverina tamim-pandresena - velvet, ny akanjo hariva vita amin'ny velvet sy ny dantelina dia ho malaza kokoa noho ny hatramin'izay. Ny ilainao ihany no tokony hitandrina amin'ny accessories, satria ny famaranana ny dantelina dia mamaritra ny akanjo mamirapiratra, ary ny velvet dia manana loko mamirapiratra, izay indraindray manomboka mipoitra be loatra, raha toa ka akaiky ny bijouterie. Ny akanjo mainty lava misy ny dantelina dia ny safidin'ny vehivavy tena tsy matahotra ny ho eo an-toerana. Rehefa mifidy akanjo ao amin'ny gorodona dia tsy voatery mijanona ao anaty lanjany mainty sy fotsy, dia afaka manangona hafa, tsy misy lamaody mendrika.
Dresses avy amin'ny gipure sy ny dantelina
Ny akanjom-boninahitra tanteraka dia efa nanjary lamaody lamaody. Matetika izy ireo dia vita amin'ny karazan-damba roa: gipure - kofehy vita amin'ny kofehy izay azo tapahina sy manjaitra, toy ny lamba sy ny kofehy hafa - loko miaraka amin'ny kofehy marevaka tsara tarehy izay ampiasaina hanakanjo ireo akanjo. Ireo akanjo ireo dia manana fofona foana, satria ny gipure dia tsy matevina loatra mba handrakofana ny vatana. Izy io dia avy amin'ny fametrahana ny fanatonana sy ny dantelina izay mamorona endrika akanjo sy endrika miavaka toy izany. Ny fantsona sy ny ampahany ambony dia azo atao amin'ny aloky ny alokaloka iray ihany, dia hahazo akanjo tsara tarehy miaraka amina tendrony. Tena malaza toy izany ny akanjo toy ny akanjo: mainty sy fotsy, ary loko marevaka. Saingy raha tianao, dia afaka mahita akanjo kofehy pastell mifanaraka amin'io fitsipika io ianao. Ohatra, ireo akanjo tsara tarehy vita amin'ny Valentino dantelina dia vita amin'ny loko maromaro. Ankizivavy maro no tia akanjo toy ny fomba tsotra sy semi-fitted. Ny fitiavana manokana dia ankafizin'ny akanjo fotsy fotsy sy mainty miaraka amin'ny dantelina izay azo akanjo ho an'ny fety, horonan-tsary, daty, hianatra any amin'ny oniversite. Lasa fitaovana manerana izao tontolo izao izy ireo.
Ny vahaolana iray hafa amin'ny fitambaran'ny fantsom-bokatra sy ny fitaratra ambony dia ny fampiasana ny loko mifanohitra amin'ny fitaovana. Noho izany dia efa antonontonona diplaopy mainty sy beige, mena na manan-karena ny alika taloha. Maro ny mpanamboatra manandrana, manamboatra fitaratra, ohatra, misy fototra amorom-patana ary mavomavo ambony na misy fantsona maitso sy manga avy any ambony. Ireo akanjo ireo dia mijery maoderina, saro-bidy, ary amin'ny fotoana iray, tsy mahazatra sy mahazatra, indrindra raha mifangaro tsara ny endriky ny loko sy ny endriky ny trano fandraisam-bahiny sy ny fitaovana, ary koa ny kiraro nalain'izy ireo hivoaka.
Akanjo hariva fohy - fifantenana ny modely tsara ho an'ireo fanao ireo
Manao ny tulip
Volo lava lava - inona no mampiavaka an'ity akanjo marevaka amin'ny vehivavy ity?
Ny akanjon'ny vehivavy dia mifanaraka
Mivembena ny akanjo
Hiantsena any Berlin
Ny akanjo mody hariva - 44 sary avy amin'ny akanjo maoderina, tsara tarehy sy nalaza indrindra
Jirom-bolo ho an'ny zazavavy
Dress for Walz
Ny leggings vehivavy
Mpandrindra fitaovana amin'ny antsy
Serum ho an'ny volo
Lisitry ny sarimihetsika momba ny zatovo, sekoly sy fitiavana
"Khrenovina" miaraka amin'ny voatabiha sy tongolo lay ho an'ny ririnina
Akupuncture - ny soa sy ny fahasimbana amin'ny fampiasana amin'ny aretina isan-karazany
Ny halalahin'ny feo - ny antony sy ny fitsaboana amin'ny olon-dehibe
Tora-pifaneraserana miavaka ho an'ny trano fatoriana
Nahoana no alefa ny kôkômbra?
Akanjo mody fararano-ririnina 2014-2015
Alexander Skarsgard dia namonjy an'i Margo Robbie noho ny henatra tamin'ny lamaody
Mpanjifa maingoka vita amin'ny fahatsapana